छोरी जन्माएको १ घण्टामै आमाको मृत्यु, परिवारसँग शिशुका लागि दूध किन्ने पैसा समेत छैन – Khabar Silo
१२ भदौ, काठमाडौं । कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक रुपमा बढ्न थालेपछि काठमाडौं उपत्यकामा स्थानीय प्रशासनले भदौ ४ देखि एक साता निषेधाज्ञा लागू गर्‍यो । सात दिन सकियो, अर्को सात दिन अर्थात १७ भदौसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको छ । तर यो ९ दिनमा सम्भावित महामारी टार्न गर्नुपर्ने कामहरु पर्याप्त भएको छैन । संक्रमित पहिचानका लागि […]
विदेशमा बसेर अमेरिकी सहयोग एमसीसी बारे अनेक टिप्पणी गर्नेहरुलाई डा. युवराज संग्रौलाले कडा जवाफ दिनुभएको छ। विदेशमा बस्ने केही केही नेपाली भन्ने शब्द जोडिएका विद्वानहरु जो दुनियाँ आफुले मात्र जानेको छ, दुनियाँ अरुले बुझ्न सक्तैनन, तेस्मा पनि नेपालमा बस्नेले त घाँस खान्छ्न भन्ने ठान्छन। डा. संग्रौला लेख्नुहुन्छ, तेस्तो होइन। यहाँ नेपालमा बस्ने पनि अंग्रेजी बुझ्न […]
कोरोना संक्रमित फेला परेपछि कैलालीमा उच्च सर्तकता
कैलालीको जानकी गाउँपालिकामा कोरोना सङ्क्रमित फेला परेपछि कैलालीका अन्य स्थानीय तहले सुरक्षा सतर्कता अपनाएका छन् । टीकापुर नगरपालिकाले बाहिरी जिल्लाबाट आउने सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न हरेक वडामा क्वारेन्टाइन स्थापना गरेको छ । टीकापुरले यसअघि नौ विद्यालयमा क्वारेन्टिन निर्माण गरेको थियो । शुक्रबार बसेको कार्यपालिका बैठकले बाहिरी जिल्लाबाट आउने नागरिक थेग्न नसकिने भन्दै हरेक वडामा थप एकएक […]